किन सेवन गर्ने पाकेको रातो गोलभेंडा, यस्ता छन् महत्वपूर्ण फाइदाहरु ! पढ्न नछुटाउँनुस ! – MediaNP
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०१४:३०0
गोलभेंडालाई अंधिकाशले अचारको रुपमा निकै स्वादिलो मानेर खानेगर्दछन् । त्यसैगरी सलाद, सुपको रुपमा पनि यसलाई निकै रुचाइएको छ । यसले तरकारीलाई निकै स्वादिलो बनाउने कारण गोलभेंडा प्रयोग नगरेको तरकारी धेरैले खान रुचाउँदैनन् । विशेषतः गोलभेडामा भिटामिन ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ लाइकोपीन, पोटासियम लगायतका अन्य तत्व भरपुर मात्रामा पाइन्छ । जसको कारणले शरीरमा रगतको कमी हुन नदिई शरीर फुर्तिलो, स्वस्थ्य अनि तनरुस्त राख्न सघाउँछ । दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने गोलभेडा स्वास्थ्य, सौद्धय दुबैको लागी उत्तिकै फाइदाजनक छ । गोलभेंडाको सेवन गर्दा पाकेको रातो गर्न उपयुक्त साबित भएको छ ।
जान्नुहोस्, पाकेको रातो गोलभेंडा सेवन गर्नुको महत्वपूर्ण फाइदाहरु ..,
१.क्यान्सर लाग्नबाट बचाउने,
गोलभेंडामा भरपुर मात्रामा एन्टीअक्सिडेन्ट पाइन्छ । जसले क्यान्सरबाट फैलने सेल्सलाई रोक्दछ । दैनिक रुपमा पाकेको रातो गोलभेंडा सेवन गर्नाले शरीर एकदमै स्वास्थ हुन्छ । दैनिक रातो गोलभेंडा सेवन गर्नाले शरीरमा बहने रगत सहि तरिकाले काम गर्दछ । गोलभेंडा मन नपर्नेले यसको सुप पनि सेवन गर्न सक्नेछन् ।
२.आँखाको रोश्नी बढाउने ।
आखाँ सम्बन्धीत कुनै समस्या छ भने यस्तो समस्याको उपचारको लागी गोलभेंडा निकै फाइदाजनक छ भने नियमित रुपमा हल्ला पाकेको गोलभेडा दैनिक सेवन गरेमा आँखाको रोश्नी पनि बढ्नेछ । किनकि यसमा भिटामिन के प्रचुर मात्रामा पाइन्छ ।
३.शरीरकोे दुखाई कम गर्न ।
गोलभेडामा क्यारोटिन पाइन्छ । जसले शरीरको दुखाईलाई कम गर्ने काम गर्दछ । यदि तपाईलाई शरीरमा निकै दुखाई फिल भएको छ भने दैनिक यसलाई सब्जी, सुप वा सलादको रुपमा खाने गर्नुहोस् । दैनिक रुपमा सेवन गर्दै जानेक्रममा शरीरमा उपर्जाशक्ति मिलेको पनि अनुभव हुनेछ ।
४.तौल नियन्त्रण गर्ने ।
गोलभेंडामा अधिक मात्रामा पानीको मात्रा हुनुको साथमा फाइबर पनि उचित मात्रामा पाइन्छ । मोटोपनाको समस्याबाट ग्रसित भएकाले दैनिक बिहान गोलभेंडाको सुप वा भोजनमा सलादको रुपमा गोलभेंडा सेवन गर्नाले तौल नियन्त्रण हुन्छ । यदि शरीरमा कोलस्टोरको मात्रा बढ्दै गएको छ भने पनि कोलस्टोरको लेवर सहि हुन्छ ।
५.पेटको किरा मार्ने ।
पेटमा किरा परेमा अत्याधिक पेट दुख्ने गर्दछ । पेटको किरा मार्नको लागी पाकेको रातो गोलभेंडालाई काटेर मरिजको पाउडरको साथमा मिलाएर खानाले करिब २ दिनमै किरा मर्नेछ । यसरी गोलभेंडा सेवन गरेमा ग्यास्ट्रिक पनि निको हुनेछ ।
बच्चाको कब्जियत सजिलै निको पार्ने उपाय ! (विधिसहित)